साउन ३१ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा, अपनाउनु पर्नेछ स्वास्थ्य मापदण्ड
काठमाडौं । काेभिड-१९ संक्रमणका कारण राेकिएकाे कक्षा १२ काे परीक्षा साउन ३१ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले साे निर्णय गरेकाे हाे । परीक्षा भदाै ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । विद्यार्थीले परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै अर्थात होम सेन्टरबाटै दिन पाउनेछन् । परीक्षा अवधिमा गाइजात्रा र जनैपूर्णिमाको दिन विदा दिएर शनिबार पनि परीक्षा सञ्चालन गरिने परीक्षा उपनियन्त्रक सुवास पन्तले बताए । परीक्षा सय पूर्णांककै...
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थगित रिजल्ट र नयाँ भर्ना कहिले खुल्ला ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएका स्नातक तहका विभिन्न तहका परीक्षाफल यसै महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ । विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहमा नयाँ भर्नाका लागि समय मिल्ने गरी असारभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको छ । स्नातकोत्तर तहमा भर्ना चाँडै सुरु गरिने जनाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोनाको प्रभावका कारण परीक्षाफल प्रकाशनमा समस्या देखिएको बताउँदै परीक्षाफल असारभित्र प्रकाशित...
कहिले होला कक्षा १२ को परीक्षा ? यस्तो छ परीक्षा बोर्डको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग अनुमति मागेको छ । भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागेको जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएलगत्तै आफूहरूले परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । अध्यक्ष पौडेलले लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा...
साउन १० गतेदेखि स्नातक तहको परीक्षा हुने (तालिका सहित)
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आगामी साउन १० देखि सुरु हुने भएको छ । त्रिविले सूचना प्रकाशन गरेर वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको ​तीन र चार वर्षे बिए‚ बिएससी‚ बिबिए र बिएड प्रथम वर्षको परीक्षा सञ्चालन हुने जनाएको छ । तीन वर्षे मानविकी शंकायको वार्षिक परीक्षा साउन १० गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । तालिका अनुसार साउन २८ गते परीक्षा सकिने छ । त्यस्तै, चार...
लाइसेन्सका लागि परिक्षाको प्रश्नोत्तर परिमार्जित, यस्तो छ नमूना
काठमाडौं । जेठ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको सवारी लाइसेन्सको नयाँ ढाँचा अनुसारको लिखित परीक्षाका नमूना प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) को लिखित परिक्षामा सोधिने प्रश्नको नमूना सार्वजनिक गरेको हो । वर्ग ‘क’मा पर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड तथा वर्ग ‘ट’ अन्तर्गतका स्कुटर र मोपेडको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित परिक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर संग्रहको परिमार्जितस्वरुप २०७८ सार्वजनिक भएको हो । नमूना प्रश्नोत्तर...